Aniga oo ah (16 sanno jir) waxaan ku noolahay waalidiintayda la’aantooda urur nolol wanaaga dhallinyarada ah. Inta baddan waxaan jeclahay in aan la kulmo saaxiibadayda. Si kastaba, Waxaan leeyahay ballamo aad u baddan. Ma tahay mid ay yihiin dhammaan carruurta oo dhan iyo dhallinyarada ku nool dalka Jarmalka? – Tips for refugees
Aniga oo ah (16 sanno jir) waxaan ku noolahay waalidiintayda la’aantooda urur nolol wanaaga dhallinyarada ah. Inta baddan waxaan jeclahay in aan la kulmo saaxiibadayda. Si kastaba, Waxaan leeyahay ballamo aad u baddan. Ma tahay mid ay yihiin dhammaan carruurta oo dhan iyo dhallinyarada ku nool dalka Jarmalka?
Dhammaan carruurta iyo dhallinyarada ku nool dalka Jarmalka waxay xaq u leeyihiin in ay helaan wakhti faraaqo iyo madadaalo.
Adiguna sidoo kale waxaad leedahay xaqaan si lamid ah dhammaan carruurta iyo dhallinyarada kale.
Dadka adiga ku daryeela waa in ay xaqaan maskaxda ku hayaan.
Si kastaba, ayagu waxay kaloo u baahanyihiin in ay si fiican kuu daryeelaan.
Waana sababtaasi waxa aad mararka qaar u qabtid ballamo iyo hawlo baddan.
Waxaad u baahnaan kartaa in aad u tagtid xarumaha rasmiga ah ee maamulka si laguu weydiiyo su’aalo ku saabsan meesha aad degantahay.
Si loo hubsado in aad halkaasi sii joogaysid.
Ama haddii aad u baahantahay in aad la hadashid qofka adiga mas’uulka kaa ah.
Si ay u oggaadaan waxa ay adiga kuu samayn karaan.
Ama haddii aad u baahantahay dukumeenti gaar ah.
Si aad u caddeysid qofka aad tahay, tusaale ahaan.
Waa in aad haysatid qaar ballamo ama hawlo ah sababtoo ah halkan waxaad joogtaa adiga oo aan kula soconin waalidiintaada.
Qofka adiga ku daryeela ma awoodi karo in uu adiga kuu maareeyo ballamahaan.
Ma u malaynaysaa in ay ballamahaan aad kuugu baddanyihiin?
Haddaba fadlan kala hadal qofka adiga ku daryeela.
Ama weydii qofka adiga mas’uulka kaa ah.
Posted on September 29, 2017 Author editorialteamCategories Rights - Rechte
Previous Previous post: Anigu waxaan ka imid dalka Suuriya waxaana ku noolaa meel deganaansho ah sannad iyo bar (waxaan ahay gabar, 15 sanno jir ah). Waxaan aad ugu xiisay dalkaygii mararka qaarna waxaan dareemaa murug. Qofkee i caawin kara? Anigu ma doonayo in aan cidna culeys saaro.
Next Next post: Aniga oo ah (16 sanno jir) waxaan ku noolahay qayb deegaan. Waxaan leeyahay bandow aad u adag. Haddii aan soo daaho waa la i ciqaabayaa. Midaasi sax miyaa?